Nyika yeJamaica mukati meCaribbean Tourism uye nzira yekumberi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Nyika yeJamaica mukati meCaribbean Tourism uye nzira yekumberi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Jamaica Gurukota Rezvekushanya Hon. Edmund Bartlett akataura kuJMMB hutungamiriri webinar. JMMB ibhangi hombe muJamaica.
Bartlett akapa mhedziso yematambudziko eiyo Jamaica yekufambisa neyekushanya indasitiri mune yepasirese pfungwa.
Uku kutaura kwekuvhura maziso kunoteedzerwa pano sechinyorwa uye kunoshanda kupfuura mamiriro eJamaica.
Verenga zvizere - kana teerera - iyi kiyi hurukuro iyo Gurukota rakaitwa paJMMB's Thought Leadership webinar.
Iyo shanduko yeindasitiri yekushanya kubva kuma1950 inogona kunyatsotsanangurwa seyakaomesesa sechikamu ichi chehupfumi hwepasi rose panguva imwe chete ichienzanisira kusimba uye kusagadzikana; nezvose zviri zviviri zvichiratidzwa nguva nenguva neyakaenzana.
Kazhinji, mufananidzo unobuda mukushanya kwenyika dzese mumakumi emakore apfuura wanga uri wekukura nekukasira uye nekukanganisika kwehupfumi hwevanhu. Vanosvika pasirese vakakura kubva pamamiriyoni makumi maviri nemashanu muma25s kusvika 1950 bhiriyoni mu1.5, zvichiita kuwedzera ka2019.
Sezvo ichiri kuramba ichikurumidza kukura uye kusiyanisa, simba rekushanyirwa kwenyika dzatambanuka kumatunhu ese epasi uye chikamu chiri pakati pezvinotungamira mukuumba mabasa, kuderedza hurombo, kutengeserana kunze kwenyika uye kuwanikwa kwemari yekunze. Mukati memakore mashanu apfuura (pre-COVID) makore, chikamu chevashandi-chakanyanya chekushanya chakakonzera 1 mune yega mishanu mabasa akagadzirwa.
Mu2019, chikamu chakatsigira mamirioni 330 emabasa kana 1 mu10 mabasa pasi rose. Mu2019, kushanya kwakapawo US $ 8.9 trillion kuGDP yepasi rose kana 10.3% yeGDP; US $ 1.7 trillion muvashanyi kunze kwenyika inosvika 6.8% yehuwandu hwekunze; 28.3% yemabasa epasirese kutengesa kunze kwenyika uye US $ 948 bhiriyoni mukudyara kwemari kana 4.3% yehuwandu hwekudyara.
Hupfumi nemagariro ehupfumi hwekushanya hwakasiyana zvakasiyana kumatunhu neupfumi hushoma husingazivikanwe hwePacific, Indian Ocean neCaribbean iri pakati pevashanyi vepasi rose-vanovimba neavhareji.
Zvichienderana nezvakawanikwa ne2021 Tourism Dependency Index inogadzirwa neInter-American Development Bank (IADB), maCaribbean anove senzvimbo inotaridzika zvakanyanya mukushanya munyika. Iyo Index yakawana kuti angangoita gumi nemaviri nyika dzeCaribbean dzinosanganisira Jamaika vakaverengerwa pakati penyika makumi maviri epamusoro-soro nyika dzinoenda mukushanya munyika neakawanda emamwe maLatin America neCaribbean hupfumi hwakatenderera pamusoro pezana.
Kuongororwazve kweWTTC's 2020 Economic Impact Report kwakaratidza kuti, munguva yepamberi penjodzi, kufamba uye kushanya munzvimbo yeCaribbean zvakapa: USD 58.9 bhiriyoni kuGDP (14% yeGDP yakazara); 2.8 mamirioni emabasa (akaenzana ne15.2% yehuwandu hwevashandi) uye USD 35.7 bhiriyoni mukushandisa kwevashanyi (zvakaenzana ne20% yezvose zvinotumirwa kunze kwenyika).
Kurwisa mamiriro ezvinhu ekuti kukura kwepasi rose kwekushanya kwakapfuura kukura kweupfumi hwenyika mu2019, fungidziro yekutanga yaive yekukura kuderera kwe3 kusvika ku4% muna2020. Izvi zvaive pachena pasati pasvika kupararira kwepasirese kweruvhero coronavirus, kutanga munaKurume 2020, iyo yakazopedzisira akamanikidza kuvharwa kwemiganhu, kuvhurwa kwendege uye kumiswa kwese kufamba kwenyika kubva munaKubvumbi kusvika munaJune 2020.